Muujinta barnaamijyada 5 Programming Common Programming - Dugsiga ITS Tech
Muujinta barnaamijyada 5 Programming Common Generation
Maaddaama ay barnaamijyadu bedesho shaqooyinka kala duwan, barnaamijyada kombiyuutarada ayaa badanaa la raadsadaa ka dib waqti kasta xasuusta dhawaanta. Marka laga hadlayo marka horumariyuhu leeyahay xirfado gaar ah, helitaanka shaqooyinka faa'iidada leh ee barnaamijyada waxay noqon karaan kuwo ka yar dalbashada shaqooyinka badan oo kala duwan, taas oo macneheedu yahay inay ku amri karaan garaaca magdhawga iyo faa'iidooyinka.
Hase yeeshee, sida faa'iido leh sida shaqooyinka barnaamijka noqon kara, waxaa jira wali rabitaan ah in lagu soo galo goobta barnaamijka sababtoo ah khilaafka joogtada ah ee ganacsiga. Halkan waxaa ku qoran shan khuraafi oo aasaasi ah oo ku saabsan barnaamijka iyo sababta aysan u ahayn mid sax ah.
Khuraafaadka # 1: Barnaamijyadu waa Dhamaan Ciyaar iyo Maya
Sheekooyinka miisaska ping pong iyo qolalka ciyaaraha ee ururada tiknoolajiyada ayaa siiyay horumariyayaal farabadan. Xaqiiqada ayaa loo sheegi doonaa, barnaamijyaduna waxay inta badan isticmaalaan saliidda habeenbarka, iyagoo soo degaya qorshayaasha xirfadaha ugu badan.
Horumarinta software-ka ee badan oo ka shaqeeya saacado la qabsasho, iyadoon loo eegin haddii ay ka shaqeeyaan guriga ama tagaan xafiis maalin kasta, marka laga reebo taasi micnaheedu ma'aha in ay maalmaha cayaarayaan. Waxay si joogto ah u shaqeeyaan habeenkii iyo dhammaadka toddobaadka, gaar ahaan marka ay joogaan shirkad weyn.
Myth # 2: Barnaamijyadu waa Dhammaan Shaqada iyo Maya
Barnaamijyadu waxay si adag u shaqeeyaan - si kastaba ha ahaatee kormeeraha hagaagsan ee hirgaliya, uma baahna inay dhaafaan usbuuca shaqada saacadaha 40. Waxaa lagama maarmaan ah in barnaamijyada soo-saarayaasha software ay shaashadaan xogtan marka ay raadinayaan xirfad. Miyuu ganacsigu dib u riixayaa macaamiisha ka qaybqaata dheeraynta xaglaha iyada oo ay ku jiraan isku-day shaqo muddo dheer ah, ama barnaamijyadaa la filayo in saacado dheeraad ah la dhigo?
Iyadoo ay caan ku tahay barnaamijka hibada leh, kuwa xiiseeya, kuwa horumariya oo aan si fiican u dabooli karin sida xeerku u saari karo lammaanaha sii wadaya oo raadinaya dhaqanka shaqada ee ka sarreeya.
Khuraafaadka # 3: Barnaamijyadaa ayaa ah mujtamac
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay in barnaamijyadu ay yihiin kuwo bulsho-diidmo ah oo caqli-gal ah oo saameeyey saacado ay ku jireen computer iyo baqshiile Cheetos. Noqo sida ay tahay, barnaamijyadaa maanta ah waxay si joogta ah ula xidhiidhaan asxaabta, kor u qaadista madaxda, iyo inay joojiyaan macaamiisha. Tani waa habka ay ku ururiyaan xogta ku saabsan barnaamijka loo baahan yahay in la abuuro.
Wakiilo tiro badan ayaa qaybta ugu badan ka shaqeeya maalin kasta oo isku xiri kara iyadoo la isticmaalayo kombiyuutarkooda iyo qalab kala duwan. Sidan, barnaamijyadaa run ahaantii ma ahan kuwo aad u qaali ah.
Khayaali # 4: Software Ma Dhamaan Shaqada
Haa, waxaa jira qalab badan oo barnaamijyadeeda 'nolosheeda' ku fududeeya. Halkii ay ka kobcin lahaayeen codsi kasta oo xoqan, horumariyayaashu waxay dareensanyihiin in ay ku tiirsanaan karaan koodhka hadda jira oo qayb ka ah shaqada iyaga. Qodobkani wuxuu ka yimid maktabadaha laga yaabo in hadda la isku dayey, iyada oo cayayaanka ay shaqeynayeen ka hor inta barnaamijyadadu ay manegaan codsigooda.
Waqti badan sida maktabadani ay u badhigi karaan, barnaamiyayaashu wali waa inay haystaan ​​awoodda ay u leeyihiin inay bedelaan koodhka si ay ugu habboonaadaan mid ka mid ah noocyada caan ah, oo si joogto ah ugu baahan kara awood ka badan inta uu ka codsanayo xoqidda.
Khuraafaadka # 5: Barnaamijyadeyaal waa Math Maths
Dhab ahaan, bulshada ayaa si qaldan loo aqoonsan yahay barnaamijyada sida xisaabta macalimiinta. Xaqiiqdii, soo saarista koodhku waxay ku dhowdahay in ay ku sameeyaan fasalada fahamka ah ee dugsiga sare iyo dugsiga. Noqo siduu noqon karo, xisaabta ku salaysan xisaabta ku saleysan waxay siin kartaa aasaas cajiib ah si loo abuuro code.
Noqoshada, sida ugu badan ee maktabadaha iyo calaamadaha naqshaduhu isticmaalaan si ay u dhisto codsiyada maanta, xisaabinta qaddarinta waxaa lagu xalin karaa si macquul ah. Iyadoo aan loo eegin suurtogalnimada inaadan aragto naftaada sida nambarro dabeecadda ah, waxaa laga yaabaa inaad ogaato qiimo badan oo ku salaysan xisaabta oo laga yaabo in ay tahay calaamad wanaagsan oo barnaamijka kuugu fiicnaanaya.
Barnaamijyadu waxay noqon karaan khabiirada ugu muhiimsan ee ganacsi kasta. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale leeyihiin xirfado ku qanciya oo iyaga siinaya waqti badan, sidoo kale. Marka ay ka fekeraan xirfadahooda oo ay dhisaan dib-u-dejin cajiib ah, waxay si joogto ah ugu yeeri karaan sicirka mushahar-qaadashada iyo nolosha dadka oo dhan oo ka dhigaya shaqada dadaalka leh ee si xaq-darro ah, inkastoo dhammaan dhibaatooyinka.
Miyir-qabka ku saabsan barnaamijka? Waa maxay sababta aan u qaadan lahjadda barnaamijka si ay u bartaan marka hore!
Waa maxay Wakhtiga Shabakadda Waqtiga (NTP)? | Tilmaamaha dhammeystiran